I-Apple Music inokuhlisa ixabiso lemirhumo yayo | Iindaba zeGajethi
Imfazwe kwimarike yomculo esasazayo yaqala ngokufika kweApple Music, ukusukela emva kokumiliselwa kwayo uninzi lweenkonzo kuye kwanyanzeleka ukuba banyamalale kwintengiso njenge-Rdio, i-Line Music okanye i-Samsung Milk. Kodwa kwimfazwe yokutsala inani elikhulu labasebenzisi okwangoku, uSpotify uphumelela umlo ngokuchasene neApple Music, ngaphandle kokuba iApple iqale ngenzuzo enkulu ngokuba nenani elikhulu labasebenzisi bazo zombini i-iPhone, i-iPad kunye neMac, kunye le nkonzo ikwaxhaswa. Okwangoku, kwaye ngokwedatha yakutshanje evela kuzo zombini iinkampani, iApple Music inabasebenzisi abazizigidi ezili-17 ngelixa iSpotify ifikelele ngaphezulu nje kwenyanga eyadlulayo Ababhalisi abazizigidi ezingama-40, ngaphandle kokubala bonke abonwabela inkonzo yabo yomculo ngentengiso ngendlela yasimahla.
Emva kokumiliselwa kungaphantsi kwenyanga ephelileyo I-Amazon Prime Music, apho eyona ntlawulo iphantsi ifumaneka nge $ 7,99 Abasebenzisi be-Prime Prime baseAmazon (bengabali i-3,99 yeedola kubasebenzisi beAmazon Echo), kubonakala ngathi iApple ifuna ukutsiba ngqo ukuze ikhuphisane ne-intanethi enkulu yokuthengisa, eya kuthi inyanzele iSpotify ukunciphisa isabelo senyanga nenyanga. Okwangoku baninzi abasebenzisi ababhatalela iAmazon Prime, inkonzo esinika imali encinci izibonelelo ezininzi, ezilungele abasebenzisi abaqhelekileyo beqonga likaJeff Bezos.
Ngokokuvuza okuthile kwabantu abanxulumene nale nkonzo yomculo, I-Apple inokucinga ngokunciphisa ixabiso.okanye ireyithi nganye ukuya kuthi ga kwi-7,99 euro ngenyanga, nge-euro zangoku ze-9,99. Kodwa oku kuncitshiswa kwamaxabiso kuya kuchaphazela nezicwangciso zosapho, ezaziza kusuka kwi-14,99 euro ukuya kwi-12,99 euro. Ukuba la maxabiso ekugqibeleni aqinisekisiwe, iApple iya kubonelela ngamaxabiso afanayo anikezelwa yiAmazon Prime Music ngoku, ishiya iSpotify ikude ekubeni ikwazi ukukhuphisana ngaphandle kokuba yehlisa namaxabiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Apple Music inokuhlisa ixabiso lemirhumo yayo